Ogaden News Agency (ONA) – Qurbajoogta Itobiya oo isu diyaarinaya banaabaxyo joogta ah
Qurbajoogta Itobiya oo isu diyaarinaya banaabaxyo joogta ah
Waxaa ka socda dunida dacaladeeda diyaargarow ay wadaan shcuubta ku nool Itobiya ay kaga soo horjeedaan adoonsiga Wayaanaha uu ku hayo shucuubtaa. Waxaa meela bada ka socda qabanqaabada banaanbaxyada iyadoo la doonayo inuu caalamka uu ka bilowdo banaabxayada looga soo horjeedo Wayaanaha ka dibna uu gaaro Addisababa. Banaabaxyada ayaa sida uu qorshaha yahay lagu wadaa inuu bilowdo 9ka bishan April.
Jaaliyadaha S.Ogadenya ayaa qayb fiican ka qaadan doonta banaabaxyada lagaga soo horjeedo dhiigyacab Meles Zinawi iyagoo tusi doona caalamka falalka jariimada ah ee ciidanka Wayaanaha ay ka wadaan dalka Ogadenya.
Shucuubta ku dhaqan Geeska Afrika ayaa maanta waxay ka midaysan yihiin inuu maamulka TPLF ku yahay khatar xasiloonida iyo wada noolaashaha shucuubta Geeska Afrika ee u ooman xoriyadda iyo cadaaladda iyo iskaashiga shucuubta iyagoo xor ah oon qawmiyadna aanay gumaysanin qawmiyad kale.
Safaaradaha gumaysiga ayaa iyaguna bilaabay olole ay dadka ku dhexgalayaan si haddii banaabaxyadaa ay xoogaystaan ay u abaabulaan qaar ka soo horjeeda oo sawirka Meles soo qaata kana soo horjeedsada banaabaxyada ka dhanka ah adoonsiga. Qorshahan ayaa waxaa aad ugu hawlan cabdirashiid Duulane oo loo xilsaaray inuu diyaariyo Somalida ku nool Ingriiska gaar ahaan.
Siyaasiyiin badan ayaa waxay aaminsan yihiin in ku dhawaaqidda Meles inuu ka dhisayo biyaxidheen weyn daafaha wabiga Nile uu ula jeedo inuu shacabka ku rajagaliyo. Iyadoo haddii ay Masaarida ka dhiidhiyaan Biyaxidheenka oo sida uu filayo KT Meles ay isku dayaan falal ay isku hortaagayaan xag diblomaasiyadeed uu ku dhawaaqi doono hadalo dagaalgalin ah si shacabka Itobiya uu ugu mideeyo in wabigoodii lagu soo duulay.
waa loo baahanyahay inay sameeyaan mudaharaaddo iyo kacdoon, maxay kaloo samaynlahaayeen, dhulkoodii ayuu ka soo caydhsaday zinawi, laakiin su`aashu waxay tahay \_ maxaa u diiday inay kacdoon ka sameeyaan wadanka gudihiisa ida wadamada kale ee waqooyiga Africa ay dadkoodu isaga dul qaadeen kali taliyayaashii?!\_ dadka ku nool itoobiya dhiig ma laha miyaa?, damiirkii baa ka dhintay miyaa? yaa ka cadawsan oo ka dhiigya cabsan kan iyaga haysta ee tigreega ah?